မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths V | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths V
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths V
Posted by Kyaemon on May 23, 2016 in Business & Economics, Community & Society, Education, Think Different |2comments
နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုက ရေကာတာ အကြောင်းအပြင်၊ ၎င်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ငလျင်
အကြောင်းတွေကိုပါ အတော် စိတ်ဝင်စားကြတယ်၊
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ထက်ကျွမ်းကျင်သူများဆီ ချဉ်းကပ်ပြီး ဆည်းပူးလေ့လာ ဖလှယ်ရတယ်
သူဋ္ဌေးသားဂိုက်လိုထုတ်ပြီး ဝါယမ မစိုက်ရင် မရနိုင်ပါ၊
ကိုယ့် “ဖားရေတွင်း” နဲ့ဘဲပျော်ပိုက်ပြီး ကျေနပ်နေရင်လဲ မရနိုင်ပါ၊
ICOLD The International Commission on Large Dams, or ICOLD, (French: Commission Internationale des Grands Barrages or CIGB)
is an international non-governmental organization dedicated to the sharing of professional information and knowledge of the design,
construction, maintenance, and impact of large dams. It was founded in 1928 and has its central office in Paris, France.
It consists of over 90 member national committees which haveatotal membership of about 10,000 individuals. Official languages
of the commission are English and French.
၁၉၂၈ ခုနှစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့မှာ” နိုင်ငံတကာ အကြီးစားရေကာတာများ ကော်မရှင်
ICOLD ” ဆိုတဲ့ အသင်းကြီး ကိုစုပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့တယ်၊ အသင်းဝင်ဆို
ဒိအပြင် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ “ငလျင်ရေးရာကော်မတီအဖွဲ့” ကိုလဲဖွဲ့စည်းကာ
ဆွစ်စလန် မှာ၊ရုံးဖွင့် အခြေစိုက်တယ်၊
ယင်းငလျင်ကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဌ ကျွမ်းကျင်သူ Martin Wieland မာတင် ဝိုင်လန် နဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့ကပြုစု
တင်ပြတာတွေကို အဆိုပါ ရေကာတာအသင်းကြီးက စီစစ်ပြီးမှ အတည်ပြု ထောက်ခံတယ်၊
ပြီးတော့ အများအကျိုးငှါအသင်းကြီး ICOLDအနေနဲ့အဲဒီ ရေးသားချက်တွေ နဲ့ ထုတ်ပြန်ကျေညာချက်တွေကို
၎င်းစာတမ်းတွေမှ ရှာဖွေ ကောက်နုတ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းတင်ပြလိုက်တယ်၊မြန်မာလိုလဲ အချိန်ပေးပြီးဘာသာပြန်တာ
လက်ဝဲဘက် က ကွန်ဂရစ် အင်္ဂတေ ချပ်အထူပြားကြီးပါ၊
ကျောက်တွေကိုအောက်ခင်း နဲ့ အချက်အချာနေရာတွေမှာခင်း
For further information, contact: Martin Wieland, Chairman, ICOLD Committee on Seismic Aspects of Dam Design, Poyry Energy Ltd., Hardturmstrasse 161, CH-8037 Zurich, Switzerland. martin.wieland@poyry.com
အမဲစက်ကလေး က ကျောက်ခဲ ပုံချ Dumped Rockfill တဲ့ရေကာတာ
အဖြူစက်ကလေးတွေက ကျောက်ခဲသိပ်သည်း စွာဖိဆီး ထားတဲ့ Compacted Rockfill ရေကာတာ
နောက်ဆုံး ဇယား တန်း က ၁၉၉ဝ မှ ၂၀၀ဝ ထိ ၁ဝ နှစ် ကာလ
မှာ ပင် Rockfill ကျောက်ဖို့ရေကာတာ ၆၈ လုံး
ငလျင်ကြောင့် ရေအများအစား သိုလှောင်ထားတဲ့ ဆည်ကြီး ရေကာတာ ကြီးတွေ ပျက်ကျ ပြိုကျပြီးတော့
တရုပ်ပြည်” ဝိန်ချွန်” ငလျင်ဖြစ်တုန်းက “လုံမန်ချန်” မြေငလျင်ကျော အနားမှာရှိတဲ့
“ဇီပင်ပု” ဆည်ကြီး ကိုသွားရောက်ပြီးလေ့လာရာ သိုလှောင် ရေ
ရေကာတာ ဆောက်လုပ်ရေး အတတ်ပညာ နည်းလမ်းတွေရှိတယ်
The technology is available for building dams and appurtenant struc- tures that can safely resist the effects of strong ground shaking.
(ပညာပါပါ)ဒီဇိုင်း ကောင်းကောင်းပုံစွဲခဲ့ရင် ငလျင်ဒဏ်ကိုတွန်းလှန်
ဒဏ်ချက် တွေ ကိုခံလိုက်ရ သော်လည်း
ရေကာတာ ဆည်ကြီးတွေ တလုံးတလေတောင် မ ပြက်ကျ မ ပြို ခဲ့
ရေကာတာတွေက ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မယ်ဆိုတာ သေချာမ သိလို့
အမြဲ လေ့လာ အကဲဖြတ်နေရအုန်းမှာ
Earthquakes create multiple hazards atadam that all need to be accounted for. There are still uncertainties about the behaviour of dams under very strong ground shaking, and every effort should be made to collect, analyze and interpret !eld observations of dam per- formance during earthquakes. IWP& DC
နှစ်ပေါင်း တသောင်း မှ တကြိမ်သာလှုပ်မဲ့
ငလျင်ကြီး ကိုကျော်လွှားနိုင်မယ် ဆိုရင်
အဲဒီရေကာတာကြီးက အန္တရာယ် ကင်း စိတ်ချ
လို့ ICOLD “မြေငလျင်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဌ Martin မာတင် ကပြော၊
မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ပတ်သက်လို့စီပီအိုင်အုက္ကဌ က ဒီအတိုင်းမီဒီယာ ကိုထုတ်ဖော်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်
မြစ်ဆုံ ဒီဇိုင်းမှာလဲ အသင်းကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့်စံချိန်စံညွှန်းပါဝင်ရေးစွဲထားကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့
Large storage dams are generally considered safe if they can survive an event withareturn period of 10,000 years, i.e. havingaone percent chance of being exceeded in 100 years.
ICOLD Bulletin 120
ရေကာတာအကြီးစား ကမြေငလျင်သင့်ခဲ့ ရင်၊
ရေဘေးကိစ္စ တွေကို ကိုင်တွယ် သလို အလားတူ
၁၉၈၉မတိုင်မီကရေကာတာအားလုံးကို ဘေးဥပါဒ် ရှိမရှိ
(အရှေ့တိုင်း ဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံ ကရေကာတာတွေကိုဘဲမဲနေမဲ့အစား
ICOLD’s revised seismic design and performance criteria for large storage damsThus, during the lifespan ofadam several seismic analyses may have to be carried out. As most dams built prior to 1989, when ICOLD has published guidelines on seismic design criteria for dams, were designed for earthquakes using seismic design criteria and methods of dynamic analyses, which are considered as obsolete today, it has become necessary to re-evaluate the seismic safety of these dams. Such evaluations have been done or are under way in several countries. But eventually all the older dams have to be checked using modern seismic design criteria and methods of dynamic analysis.
ရေကာတာဆည် မှ သိုလှောင်ရေ ကြောင့်
ငလျင် ဖြစ်လာအောင်ဖန်နိုင် တယ်
“မှု” နေ စဉ်းစားနေဘို့ မ လို
ဒီကထုတ်ပြန်ချက် (အမှတ် ၁၂၀)ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်း ပေကြိုးအတိုင်းအတာ
မြစ်ဆုံရေကာတာ က CFRD (Concrete Faced Rock Fill Dam ) (ကွန်ဂရစ်မျက်နှာ ကျောက်ခဲဖို့) ရေကာတာ
မြေကြီး ရွှံ့နွံနဲ့မဟုတ် ကွန်ဂရစ်နဲ့ ကျောက်ခဲဖို့ ဆိုတော့ ပိုခိုင်ခံ့ ပိုကြာရှည်ခံ၊
ရေစိမ့်ဝင်တာ ကို ကာကွယ်တားဆီးဘို့ (ဝါ) သက်သာဘို့သိုလှောင်ရေ
ဘက်ကိုမျက်ပြုပြီး တပေ ကနေ သုံးပေထိ ထူတဲ့ ကွန်ဂရစ် အချပ်ကြီးကိုတပါတည်း
“ခု (၂၀၀ဝ ခုနှစ်) ဆို CFRD ရေကာတာ က ခေတ်စား ” (ဇယား ကြည့်)
Today, the CFRD is againamajor dam type. Figure 1- 1 illustrates the trends in the height of the CFRD up to the year 2000.
ရေမဝင်ရအောင် ကွန်ကရစ် အင်းဂတေ တို့ကပ်တရာ တို့ကို
ရေသိုလှောင်ဘက် (ရေအဝင်ဘက်) မှာသေချာခင်းနေပုံ
လက်ဝဲ က ကွန်ကရစ် အင်းဂတေ အချပ်ပြားကြီး
၎င်းရဲ့အောက်ခြေမှာ အခြေခိုင်ခံ့ပြီး ရေလုံ ဇုံမှာ ကျောက်ခင်း
ကျောက်ဖို့ ထားလို့ အခြားရေကာတာ (ဥပမာ မြေဖို့) အမျိုးအစားတို့ထက်
ရေစိမ့်ဝင် leakage/seepage ခံနိုင်ရည် ရာခိုင်နှုန်း ပိကြီးi
(ဆိုလိုတာက ကျောက်ခဲကမြေကြီးထက် မာ ကျော တောင့်တင်း လို့ မြေ
ဖို့ရေကာတာ ထက် ပိုမြင့်အောင်ဆောက်လုပ် နိုင်၊
ဒိပြင် မြေဖို့ရေကာတာကရေစိမ့်ဝင်တာကို ကျောက်ဖို့ရေကာတာ
လောက် ခံနိုင်ရည် မရှိ၊
ကျောက်ခဲတွေက စိမ့်ဝင်လာတဲ့ရေ ကိုပြန်
1.4 Evaluation of Leakage Performance
The leakage performance of the CFRD has recently been criticized in the professional literature (Anthiniac, et al, 2002). Four case histories were studied and evaluated using numerical analysis:
Brazil, Mexico, China ဆိုတဲ့ သုံး နိုင်ငံတွေ က ၁၂၅မီတာ(၄၁ဝ ပေ) မှ
၁၈ဝ မီတာ (၅၉ဝ ပေ) ထိ အမြင့်ရှိရေကာတာကြီး
၄ လုံးဆီကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်
ရေစိမ့်ဝင်တဲ့ နှုန်းမြင့်ပေမဲ့လဲ ရေကာတာအဆောက်အအုံကိုဒုက္ခမပေး၊
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စ္စ္စ္စည်း (ကျောက်ခဲတုံးကလေး) တွေက ရေစိမ့်ဝင်တာကို လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်စိမ့်ထွက်ပေး
ရေယိုစိမ့်ဝင်နှုန်း က ပိုမြင့်တယ်ဆိုပေမဲ့အအန္တရာယ် မရှိ ကြောင်းကို
Aguamilpa, Mexico, 187 m high; Xingo, Brazil, 140 m high; Tianshengqiao 1, China, 180 m high; and Ita, Brazil, 125 m high. Based on the analysis of these four dams, the authors state:
“The safety of the dams was never called into question, since the materials of which they are made enable water to flow out freely without causing any damage, but the leakage rates were deemed to be too high, given the type of dam and the functions involved. Moreover, the current trend is to accept increasingly high leakage rates, implying that leakage is notadanger.”
ရေစိမ့်မဝင်ရအောင် အခြေခံ အတားအဆီးဟာ သိုလှောင်ရေ နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့ ကွန်ဂရစ်အချပ်ပြားကြီး Face Slab ပါ၊
ကွန်ဂရစ်အချပ်ပြားကြီးတွေမှာ အက်တာ ရေမလုံတာ အပေါက်ကလေးတွေ
မ ရှိရအောင် အင်မတန်ဂရုစိုက်တယ်
The primary water barrier of the CFRD consists of concrete face slabs poured on underlying support zones of the rockfill body of the dam. The face slab is fully supported by the underlying rockfill, and is mostly in compression under reservoir loadings, except towards the dam abutments where tensile strains develop. Because of this, the design of face slabs in recent years has concentrated more on watertightness and durability than on strength design of the slabs, and increasing attention has been paid to identification and control of crack development in face slabs.
ကျောက်ခဲကလေးRockfill တွေတို ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအောင်
တ လွှာပြီးတလွှာ အထပ်ထပ်လဲခင်းတယ်
Concrete Faced Rockfill Dams (CFRD’s) are one type of embankment dams that are built with compacted rockfill in layers or lifts and covered with concrete slabs at the upstream face as part of an impermeable barrier for the water. The body of the dam is usually divided into zones designated with numbers and letters depending on the particle size, material type and purpose. A typical CFRD zoning is shown in Figure 1 (Cooke and Sherard 1987).
lop. Because of this, the design of face slabs in recent years has concentrated more on watertightness and durability than on strength design of the slabs, and increasing attention has been paid to identification and control of crack development in face slabs.
ကမ႓ာမှာ အမြင့်ဆုံး တရုပ်ပြည်က ပေ ၇၆၄ ရှိ Shuibuya ရှုဘုရ ရေကာတာ ဟာ
Rockfill CFRD ရေကာတာ အမျိုးအစားဖြစ်တယ်
အထက်ပါပုံတွေက Shuibuya ရှုဘုရ ရေကာတာ ဖြစ်ကြပြီး ရေစိမ့်မဝင်ရအောင် ရေအလာဘက်မှာကွန်ကရစ် ပြားကြီး တွေအချပ်လိုက်ခပ်ထူထူခင်းထားတယ်၊
တချပ်နဲ့တချပ်ကြားမှာလဲ ရေလုံအောင် ကော် ကပ်တရာ Seal နဲ့ပိတ်ပစ်တယ်၊
မြစ်ဆုံရေကာတာလုပ်နေရင်းတန်းလန်း ဆိုင်းငံ့ရတဲ့ CPI စီပီအိုင် ဆောက်လုပ်ရေး
နဲ့ အပေါင်းပါတွေက ဒီဧရာမ ရေကာတာကို ဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်
အမြင့် ပေ ၇၆၄ ရှိပြီး၊ ၂၀၀၂ ကစ လုပ်တာ ၂၀၀၈ မှာပြီးစီးခဲ့တယ်၊
ဂျပန် မှာလဲ Asphalt ကပ်တရာ နဲ့ ရေကာတာကိုရေလုံအောင်ခင်း
ရေကာတာ အစိတ်အပိုင်း အသီးသီး အတွက်
ရေလုံ အောင် သုံးဘို့ ပစ္စည်း တန်ဆာပလာအမျိုးမျိုး
ရေကာတာဆောက်လုပ်ရေး အတတ်ပညာ သင် တက္ကသိုလ်
တွေကို တရုပ်ပြည်မှာဖွင့်လှစ်ကာ ဘွဲ့လွန် ပါရဂူဘွဲ့သင် တန်း
အထိ ထားရှိတဲ့အပြင် ၎င်းအတွက် သုတေသန ဌာနတွေလဲ
အောက်ပုံကပေဂျင်း သုတေသနတနေရာ၊ ကျန်တာက တရုပ်ပြည်က
Mortar and epoxy ကော်တမျိုးနဲ့ချောမွေ့အောင် အချော ထပ်ကိုင်
သံကြိုးအကြီးကြီး သံအူတိုင်အကြီးကြီး နဲ့တောင်ကမ်းဘားကိုဖောက်ထွင်းပြီး
အထက်ပါပုံတွေကမလေးရှား ဘော်နီယို က ဘ ကွန်း ရေကာတာ
ကျောက်ခဲဖို့ ကွန်ဂရစ်ပြားမျက်နှာစာ အတန်းအစား ဘဲ
အမြင့်က ၆၇၃ ပေဖြစ်ပြီး၊မလေးရှားမှာ အမြင့်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံး
ကမ႓ာမှာဆိုရင် ဒတိယ အမြင့်ဆုံး၊
၎င်းရေကာတာကို စီပီအိုင် နဲ့အပေါင်းပါ တို့ကဘဲ ဆောက်လုပ်
တာ ၂၀၁၁ မှာပြီးစီး
ယိုးဒယား က Sri Nakarin Rockfill CFRD ရေကာတာ
အီတာလီ က Arcichiaro Rockfill CFRD ရေကာတာ
ဒီလိုဘဲ ကွန်ကရစ် ခင်း
အာဖရိက Lesoto လီဆိုတို က Mohale Rockfill CFRD ရေကာတာ
ရေသိုလှောင်ဘက်ကိုမျက်နှာပြုတဲ့ ရေကာတာ အခြမ်း ကိုကွန်ဂရစ်
ဝသဘုံကို တရုတ်အစိုးရ အကူအညီပေးနေတာ ဟုတ်သလား တရုတ်သဘုံကြေးမုံဂျီး..